नक्कली आँशुमा झुक्याउने चेलीहरु : छोरा हराएको भन्दै रुदै लाईभ आएकी शोभा र पीडित भनिएकी कल्पना दर्जीको वास्तविकता बाहिरियो ! (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
नक्कली आँशुमा झुक्याउने चेलीहरु : छोरा हराएको भन्दै रुदै लाईभ आएकी शोभा र पीडित भनिएकी कल्पना दर्जीको वास्तविकता बाहिरियो ! (भिडियो सहित)
छोरा हराएको भन्दै रुदै लाईभ आएकी शोभाको वास्तविकता यस्तो !
काठमाडौं । गएको कार्यक्रममा विद्यालयबाट आफ्नो छोरा हराएको भन्दै शोभा खड्का नाम गरेकी महिला रुदै लाईभ कार्यक्रममा आएकी थिइन् ।
उनले रुदै आफ्नो रुदै लाईभ कार्यक्रममा आएकी लगेको भनेपछि हामीले यस विषय थप फलोअप गरेका छाैं । उनले छोराछोरीले अध्ययन गर्ने इनभेटिभ स्कुलबाट बेपत्ता भएको भने पनि उनिहरु आफ्नै हजुरबा हजुर आमासँग नुवाकोटमा रहेको पाइएको छ ।
विद्यालयमा दशै बिदा शुरु भएपछि बालबालिकाका बाबु सुरेन तामाङले परिवारका अन्य सदस्यसँग पठाइदिन भनेपछि बिद्यालयले उनका काका नेमा तामाङलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
तर पारिवारिक विवाद भएकै कारण शोभा खड्काले भने छोराछोरी आँफुलाई जिम्मा नलगाई अरुलाई जिम्मा लगाएको भन्दै बिद्यालय, प्रहरी अनि हाम्रो कार्यक्रममा समेत गुनासो गरेपछि बुधबार विद्यालयले छोराछोरी र आमालाई तीनकुने प्रहरीमा उपस्थीत गराएको थियो ।
छोराछोरीले भने काकासँगै नुवाकोट जाने मन गरेपछि हजुरबा हजुरआमाकै घरमा फर्किएका छन् । श्रीमान श्रिमतीबीच राम्रो सम्बन्ध नभएपछि बच्चाहरुको हेरचाह वुवालेनै गरिरहेका छन् ।
छोरा छोरी पनि आमासँंग भन्दा हजुरबा हजुर आमाँगै बस्न रुचाउँछन् । यसरी शोभा खड्काले विद्यालयले बेपत्ता बनाएको भनि लगाएको आरोप गलत सावित भएको छ ।
पीडित भनिएकी कल्पना दर्जीको वास्तविकता बाहिरियो !
सामाजिक सञ्जालको व्यापकतासँगै यसको दुरुपयोग पनि बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा समस्यामा पर्ने वित्तिकै फेसबुक मार्फत भिडियो लाइभ गर्ने र भाइरल गराउने परम्परा नै बनेको छ । धेरै जसो वास्तविक पीडित हुने भएपनि केहि व्यक्तिहरुले भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमा छाउने बाटो मात्रै बनाएका हुन्छन् ।
केहि महिना पहिले सिरियामा दुख पाएको भन्दै हाम्रो नाममा भिडियो रेर्कड गरेर भाइरल भएकी धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका ९ की कल्पना दर्जीको भिडियो प्रशारण मात्रै गरेनौँ उनको परिवारको खोजी गरि उनका बाबुसँग पनि कुरा गराैं ।
तर कल्पना दर्जीको वास्तविकता पनि फरक रहेछ । यो भिडियो भाइरल भएपछि उनी कार्यरत घरका मालिकसँगै बसेर आँफु राम्रो अवस्थामा रहेको भन्दै अर्को भिडियो पठाइन् । यसरी कल्पना दर्जीले पनि भाइरल हुनैका लागि भिडियो रेर्कड गरेको देखिएको छ ।
Prevआफु सुत्ने कोठामा यी ६ कुराहरु भुलेर पनि नराख्नुस्, जसले दाम्पत्य जिवनमा यस्तो हानि पुर्याउँछ ! बिबरण सहित हेर्नूहोस
Nextह्वातै बढ्यो डलरको भाउ। साउदी,कतार, दूवइ लगायत अन्य विदेशी मूद्राको पनि भाउ बढ्यो।।।
सर्बसाधारणलाई नै चकित पार्दै यी कांग्रेशका चर्चित नेताहरु सडकमा बसेर बुट पालिस गर्न थालेपछि
साबधान ! यौन इच्छा दबाउँदा यस्तो खतरनाक असर पर्न सक्छ : डाक्टर सुवोध